UkuJonga -Imibono, indawo, uMgangatho, uKhuselekileyo.
Ubomi basebusuku, ivenkile, iindawo zokutyela ziyimizuzu eli-10 kude kwiZiko lokuThenga laseSouth Park.
Uya kuyithanda i-Overlook ngenxa yendawo yayo efanelekileyo, i-ambiance epholileyo kunye nemibono yokuphumla.
Ithe ngcu phezu kwelali yaseSt. Joseph iOverlook izidla ngempepho ezitshisayo kunye nokuphefumla okuthatha iimbono zepanorama. Jabulela isiselo kwiveranda ngaphambi kokuba ulale kwaye uvuke kwizandi zeentaka.
Ilungele izibini, abahambi ngezoshishino kunye nabantu baseTrinidad ababehlala phesheya iminyaka emininzi kwaye batyelele nosapho lwabo.
Ibonelela abatyeleli kunye nabakhenkethi ngendlu yabucala kwigumbi lokulala eli-2, eligubungela wonke umgangatho kunye neebhalkhoni ezimbini ezikhuselekileyo.
Nceda uqaphele ukuba ixabiso elisisiseko lelendawo yokuhlala kunye negumbi lokulala elikhulu.
Igumbi lokulala lesibini lifuna iindleko ezongezelelweyo. Ngokwesiqhelo ezi ndleko zibalwa ngokuzenzekelayo ngenani leendwendwe ezingaphezulu kweendwendwe ezi-2. Ukubhukisha apho undwendwe olu-2 lufuna amagumbi okulala ahlukeneyo oku kuya kufuneka kuchazwe kwangaphambili, kuba ngokwesiqhelo igumbi lesi-2 liyatshixwa kwaye akukho nelinen ikhutshwayo xa kukho undwendwe olu-1 okanye olu-2.
Le ndlu yeyanamhlanje ineplani yomgangatho ovulekileyo, iisilingi eziphakamileyo zinika umbono kumagumbi amaninzi. Xa ungena uya kwazi ukuba usekhefini.
Ngenxa ye-coronavirus, sithatha inyameko eyongezelelweyo yokubulala iintsholongwane kwindawo ehlala iphathwa phakathi kogcino. Sikwafuna nokuba isaziso seentsuku ezisi-7 sikwangaphambili ukuze sivumele ixesha elaneleyo lokulungiselela.
Ubumelwane buphezulu kwaye bunikezela ngeembono zepanoramic ezingenasiphene.
Amakhaya awodwa, anobuchule kwaye abonisa ukuzingca ngobunini. Ibonisa ukuphila emazantsi kokona kulungileyo.
Uncedo kukufowuna nje kude.